Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Japana
Pejy 2 amin_ny 54
Tantara mikasika ny Japana
Mihitsoka sy mirehitra ny orinasa ‘Mario Kart’ mpanao cosplay taorian'ny nampakarany ny fanapahankevitry ny Nintendo
Hehy20 Febroary 2020
Amporisihina ireo mpanjifa hanao fiankanjo natolotry ny Maricart ho toy ireo endrik'olona malaza ao anaty andiany "Mario Kart" an'ny Nintendo sy mba "hihazakazaka" ao an-tanàna, saingy efa tapitra ireny andro ireny.
Ny fifaningoran'ny ‘kawaii’ sy ny kolontsaina pelaka Japoney
Hevitra18 Desambra 2019
Fa ampahany lehibe amin'ny asan'i Rune izay tsy dia resahina firy ny asa nataony ho an'ny gazetiboky Barazoku (1971-2008). Barazoku no gazetiboky voalohany amidy ho an'ny rehetra eny an-tsena natokana ho an'ireo lehilahy voasinton-dehilahy amin'ny resaka fananahana tany Japana.
Mampiavaka an'i Japàna ve ilay toerana miringiringy natao ho fitaingenana bisikileta mitety valanjavaboary?
Hehy15 Desambra 2019
Ao Japàna, ilay valanjavaboary miavaka ao Okayama dia manasa ireo mpitsidika mba handresy ny lalànan'ny fisarihan'ny tany avy eny ambony bisikilety miringiringy eny ambony be eny.
Nolalaovina toy ny ‘kabuki’ ilay sarimiaina ‘Nausicaä’ malaza be avy any Japàna
Hevitra11 Desambra 2019
Nausicaä of the Valley of the Wind (Nausicaä an'ny Lohasahan-dRivotra), iray amin'ireo sary nohetsehana malaza indrindra ao Japàna, dia holalaovina toy ny Kabuki ny Desambra 2019 ao Tokyo.
Manoritra ny tantara lava katolika tao Nagasaki ny fitsidihan'ny Papa Fransoà
Fivavahana02 Desambra 2019
Nanasongadina ny vakoka ara-tantaran'ny kristiana ao amin'ny firenena ny fitsidihana voalohany nataon'ny Papa tao Japana tao anatin'ny efa ho efapolo taona izay, namantarana ireo fanamby lehibe atrehin'ny hafa eto amin'izao tontolo izao.
Niteraka fanoherana ny foaran'ny fitaovam-piadiana Japoney
Ady & Fifandirana29 Novambra 2019
Nitsena mpanao fihetsiketsehana ao an-toerana farafahakeliny miisa 400 ny varotra fampisehoana iraisampirenena momba ny fitaovam-piadiana ao Japana mampivoitra ny lalan-tery idiran'ny governemanta japoney sy ny indostiriany manoloana ny lova mpandala ny fandriampahalemana taorian'ny ady [lehibe].
Angondrakitra vaovao aty anaty aterineto mitahiry ireo sary efa ho 40.000 momba ny fibodoan'i Japàna an'i Shina
Shina23 Novambra 2019
Angondrakitra vaovao aty anaty aterineto mitahiry ireo sary efa ho 40.000 manome topimaso momba ny fibodoan'i Japàna ny tao avaratra atsinanan'i Shina
Shina: Tantara ratsin'ny resaka akoho mitsindrona ‘hormone’ aroson'ireo orinasa ‘Fast Food’ maro rantsana erantany
Etazonia22 Novambra 2019
Maromaro ireo orinasa maro, toy ny KFC sy McDonalds, no voasaringotra aminà tantara ratsy momba ny sakafo tsy ara-pahasalamàna tato ho ato. Misy ireo feo nasiônalista miantso ny handroahana ireo marika vahiny, raha ny hafa kosa mihevitra hoe ireo manampahefana tomponandraikitra no tokony hotsiniana amin'ny tsy fanarahamaso ny fiarovana ara-tsakafo.
Mampiseho ny fanagadrana ireo Japoney taorian'ny Ady Lehibe Faharoa ny teatira Tashkent
Ozbekistan20 Novambra 2019
Tamin'ireo Japoney nogadrain'ny Firaisana Sovietika hanao asa an-terivozona taorian'ny fiafaran'ny ady dia olona teo amin'ny manodidina ny 25.000 teo ho eo no nentina nankany Uzbekistan.
Mankalaza ny Halloween tsotsotra any Japana
Hehy04 Novambra 2019
Lasa fomba amam-panao amin'ny volana Oktobra any Japana ny "Mundane Halloween."
Aogositra 2020 18 Lahatsoratra